30 Shabakadaha Internetka ah oo lagu iibiyo Farshaxanka 2022 % Goobta Hantida
Bogga ugu weyn 30 Shabakadaha Internetka ah oo lagu iibiyo Farshaxanka 2022
Ku -ganacsiga internetka waa wanaagsan yahay laakiin doorashada inaad ku samayso mid kasta oo ka mid ah mareegaha ugu fiican gaar ahaan marka ay timaaddo iibsashada iyo iibinta alaabada farshaxanka iyo farshaxanka waa mid ka mid ah fikradaha ugu fiican. Tani waa sababta oo ah aaladaha noocan oo kale ah way sahlan yihiin oo aad bay ugu habboon yihiin gelitaankooda. Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa wax ku saabsan 30 -ka degel ee internetka lagu iibiyo Farshaxanka sannadka 2022 -ka.
Mareegahan online-ka ah waxay siinayaan qol loogu talagalay farshaxanka tayada leh iyo alaabada farshaxanka si looga soo bandhigo meel kasta oo adduunka ah. Marka laga reebo farshaxanka iyo farshaxanka, waxaa jira alaabooyin kale oo tiro badan oo laga heli karo halkaas.
Sidaa darteed, haddii aad tahay ururiyaha farshaxanka raadinta meelaha aad ka iibsan karto farshaxan jaban, maqaalkani wuxuu si isku mid ah kuu ballan qaadayaa inuu ku qanciyo baahidaada maadaama ay ka kooban tahay 30-ka shabakadood ee ugu wanaagsan khadka tooska ah ee lagu iibiyo alaabada Fanka.
Kooxdayada qoraayaasha khibradda leh iyo shakhsiyaadka khadka tooska ah ayaa geliyey cilmi-baaris aad u adag iyo agab si ay ula yimaadaan liiskan ballan-qaadka ah ee hubaal ah inuu ku qancinayo rabitaankaaga.
Hadda tani waa waxa aad u baahan tahay inaad sameyso
Si taxaddar leh u aqri maqaalkan adigoon is daboolin waadna ku farxi doontaa inaad sidaas samaysay. Laakiin ka hor markaa waxaad si dhakhso leh ugu dhex mari kartaa shaxda tusmada hoose si aad u hesho aragti ku saabsan mareegaha ugu fiican.
Miyaad raadineysaa suuq onlayn ah si aad u iibsato farshaxan la awoodi karo? Liiska soo socda ayaa soo bandhigaya ikhtiyaarro badan baahidaada!
Ma maqashay Etsy? Waxaa laga yaabaa inaad maqli lahayd Etsy, laakiin marmar dhif ah weli ma maqli doontid shabakadda internetka ee Etsy, markaas ayaan kuu soo bandhigi doonaa - waxaad raadineysay oo dhan.
Etsy waxay u badan tahay inuu yahay suuqa ugu weyn uguna wanaagsan ee dadka si joogta ah ugu soo qulqula internetka si ay u raadiyaan meelo ay ku iibsadaan farshaxan la awoodi karo. Saaxiibkay ayaa mar ku kaftamay Etsy ammaan isagoo leh - waxa kaliya ee aan laga iibin Etsy waa aadanaha.
Suuqa internetka waxaa ku jira wax kasta oo aad ka fekeri karto oo ku saabsan farshaxanka iyo farshaxanka oo u dhexeeya alaab caadi ah ilaa farsamooyin casri ah oo ay ku jiraan sawirro iyo xitaa saabuun gacmeed. Xusuusnow, waxaan idhi wax walba, wax walba halkan ayaa lagu iibiyaa.
Hadda haddii aad tahay qof hal -abuur leh oo aad jeceshahay in aad nolol ka dhigto caqligaaga, Etsy ayaa suuq kuu ah. Waxay ka saraysaa liiskayaga suuqyada ugu fiican ee internetka si loo iibiyo farshaxanka iyo alaabta farsamada.
Waa kan sida Etsy u shaqeeyo - ku biiritaanka suuqa qadka gabi ahaanba waa lacag la'aan maadaama aysan waxba ka dalbanayn inay iska diiwaan geliyaan masraxa.
Hadda, si loogu qoro shay lagu iibiyo madasha, Etsy wuxuu ku dallacayaa qiyaastii 0.20 senti muddo 4 bilood ah ama ilaa shaygaaga la iibiyo. Haddii ay dhammaato muddada 4ta bilood ah oo alaabtaada aan la iibin, waa inaad dib u liis garaysaa isla badeecad kale 0.20 senti haddii aad weli rabto in shaygaaga lagu qoro madal.
Marka labaad, khidmadda boqolkiiba 3.5 ee shay kasta oo lagu iibiyo masraxa waxa loo xawilaa Etsy. Tusaale ahaan waxaad ku iibisay shay goobta $100, waxaa lagu siinayaa $96.5 halka $3.5 ee soo hartay ay aadeyso Etsy.
Fadlan ogow inaad leedahay kaarka amaahda oo ansax ah si aad ugu qorto madal. Sidoo kale, ogow inaysan si otomaatig ah kuugu deynin markay tahay bixinta lacag bixinta. Waxay marka hore kuu soo diraan qaansheegad ay ku doonayaan oggolaansho si aad xisaabtaada ugala baxdo ka hor intaadan sidaas samayn.
Malaayiin ka mid ah kuwa wax iibsan kara ayaa maalin walba soo booqda goobta sidaa darteed haddii aad raadinayso Meelaha Suuqa ugu Wanaagsan si aad u Iibiso Farshaxanka iyo Alaabada Farshaxanka, Etsy ayaa ii hoggaaminaysa.
Haddii aad tahay shakhsi online ah markaa waa inaad ogaataa in sanduuqyada is-diiwaangelinta ay caan ka heleen dhowrkii sano ee la soo dhaafay taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah suuqyada ugu fiican ee internetka ee lagu iibiyo farshaxankaaga iyo farshaxankaaga.
Waxaa jira sanduuqyo is -qoritaan farsamo oo aad ku gaari karto tiro aad u badan oo dhagaystayaal ah oo doonaya inay ka iibsadaan farshaxanka la awoodi karo internetka. Cratejoy waa mid ka mid ah hababka aad ugu abuuri karto sanduuqyada rukunka farshaxankaaga iyo farshaxankaaga. Cratejoy wuxuu soo bandhigayaa dhammaan aaladaha lagama maarmaanka u ah inay alaabadaada ku iibiyaan internetka.
Si aad wax badan uga ogaato suuqa internetka, booqo websaydhka rasmiga ah adigoo gujinaya badhanka.
#3. Iibso Gacan -ku -samays
Dukaanka Handmade waa mid ka mid ah mareegaha khadka tooska ah ee sida aadka ah u kobcaya ee abuurayaasha raadinaya inay gaadhaan dhagaystayaasha. Waxaa jira faa'iidooyin iyo waxyeellooyin in lagu iibiyo goobta. Faa'iidooyinka ayaa si fudud u ah xaqiiqda u baahan gabi ahaanba waxba in lagu qoro alaabtaada goobta. Ku dukaamayso wax lacag ah oo lacag ah si aad liiska ugu samayso goobtooda taasoo la macno ah inaadan halis ugu jirin inaad lumiso lacag marka aan farshaxankaaga la iibsan.
Khasaarooyinka liiska ku jira madalku waa xaqiiqda ah in dukaan-gacmeedku uu yahay madal cusub oo uu tartan adag kala kulmo goobo kale oo la aasaasay sida Etsy. Markaa haddii aad dooranayso inaad ku liis garayso farsamadaada goobta, ma filayso inay hesho taraafikada ugu badan ee ku taxan goobaha sida Etsy.
Waxaan u maleynayaa in habka ugu wanaagsan ee halkan uu yahay in lagu liis gareeyo alaabtaada Etsy iyo dukaanka gacanta lagu sameeyo si ay dhegeystayaasha u gaaraan ballaaran.
Miyaad haysataa alaab gacmeed lagu sameeyay ama alaab farshaxan oo kale oo aad jeceshahay inaad iibiso? Waxaan kaa baryayaa inaad si bilaash ah iskaga qorto madalkan oo aad geliso sawir cad oo badeecadaada ah oo aad aragto sixirka suuqa internetka.
Booqo halkan si aad wax badan uga ogaato dukaanka gacanta lagu sameeyo oo is -qor
kan akhri, 13 meelood oo aad ka heli karto lacag la'aan maalmaha dhalashadaada
#4. GLC Craft Mall
GLC Craft Mall wuxuu u shaqeeyaa sida suuqyada dhabta ah ama dhismayaasha dukaamaysiga halkaas oo dadku ka kireeyaan dukaan si ay u soo bandhigaan badeecadooda una bixiyaan bil kasta ama sanad walba iyadoo ku xiran heshiiska lala galay milkiilaha suuqa.
Sida suuqa nolosha dhabta ah ee kor lagu sharaxay, GLC Craft Mall waxay u ogolaataa isticmaalayaasha inay abuuraan dukaamada farshaxanka iyo farshaxanka gudaha goobtooda.
Boggu waxa uu ogolyahay oo kaliya in la soo bandhigo fanka iyo farsamada gacanta maadaama liis kasta oo ka soo horjeeda tan loo qaadan doono xad-gudub goobta. Tani waxay ka dhigaysaa GLC Craft mall mid ka mid ah suuqyada ugu fiican khadka ee lagu iibiyo farshaxanka iyo agabka farsamada
Si aad dukaan uga furto barxadda, waxaa lagaa rabi doonaa inaad yeelato koonto Paypal maadaama lacag -bixinnada madalku ay ka dhacaan PayPal. Madalku ma aha lacag la’aan maadaama goobtu ay adeegsato dadka isticmaala $ 3.5 bishii si ay u shaqeeyaan dukaan.
Booqo halkan si aad wax badan uga ogaato goobta.
#5. Gacan -ku -samaynta Amazon
Amazon waa mid aan la isku haleyn karin madal -weynaha ugu weyn ee khadka tooska ah ee dukaameystayaashu u tagaan inay wax ku iibsadaan wax kasta oo adduunka ka jira. Amazon ayaa dhowaan soo saartay degel hoosaad loo yaqaan Handmade by Amazon kaas oo si gaar ah loogu talagalay farshaxanka iyo farshaxanka.
Haddii aad rabto inaad ku iibiso badeecadaada madal, u sheeg iyaga adoo u diraya codsi tan.
# 6. Dukaan
Shopify waa nooc ka duwan madal online ah. shirkado badan oo caan ah ayaa ka faa'iidaysta madal si ay u dejiyaan ganacsigooda e-commerce si ay u gaaraan dad badan oo dhagaystayaal ah.
Si ka duwan eBay ama Amazon, iyo suuqyada kale ee caanka ah ee internetka, farshaxankaagu kama soo muuqan doono nooc kasta oo hage ah. Asal ahaan waxaad tahay - sida kor lagu soo sheegay - kaliya waxaad isticmaashaa qalabkooda iyo qalabkooda si aad dukaankaaga u dejiso sidaad rabto.
Booqo halkan si aad wax badan uga ogaato
Bonanza waa mid ka mid ah aaladaha khadka tooska ah ee sida aadka ah u koraaya si loogu iibiyo nooc kasta oo badeecooyin ah, oo ay ku jiraan farshaxanka. Shakhsi ahaan waxaan kula talinayaa madal dadka i weydiiya suuqyada ugu fiican ee internetka si ay ugu iibiyaan farshaxanka iyo alaabta farsamada.
Suuqa internetka wuxuu siiyaa dadka isticmaala ikhtiyaarka ah inay ku soo bandhigaan badeecadooda mareegaha ama u abuuraan dukaankooda internetka sida ay rabaan. Sidoo kale, Bonanza, adeegsadayaashu waxay soo dhoofsadaan alaabtooda iyagoo ku soo bandhigaya goobo kale sida Amazon ama eBay.
Wax badan ka baro madal halkan.
Miiduu waa goob kale oo lagu iibiyo fanka iyo farsamada gacanta. Madalku waxa uu la socdaa waxyaabo badan oo xiiso leh sida habayn la beddeli karo oo si fudud loo isticmaali karo, domain gaar ah iyo agab kale. Goobtu hadda waxay ku jirtaa meelaha ugu sarreeya e-commerce-ka ugu wanaagsan.
Waxa kale oo aad ka akhriyi kartaa tan: 11 meelood oo aad lacag ku heli karto si aad u tijaabiso alaabta guriga
#9. farsamada gacanta
iCraft si adag ayaa loogu talagalay alaabada gacanta lagu sameeyo. Waa madal qaali ah oo loogu talagalay kaliya shaqsiyaadka farshaxanka halista ah. Haddii farshaxanku yahay shaygaaga, yacnii waxaad nooshahay oo aad neefsanaysaa farshaxanka, markaa iCraft malaha maxaa dhici lahaa haddii aad raadineysay.
Si ka duwan suuqyada kale ee onlaynka ah, kaliya alaabada gacanta lagu sameeyo ayaa lagu soo bandhigi karaa goobta taas oo u baahan khidmadda is -qoritaanka oo ah $ 25 ka dibna waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso $ 5 oo ah khidmad bille ah. Laakiin uma baahnid inaad ka walwasho eedaynta haddii aad hubto farsamooyinkaaga. Goobtu waxay leedahay gaadiid aad u weyn iyo iibsadayaal dhab ah.
Booqo goobta si aad wax badan uga ogaato
Zibbet waa degel kale oo e-commerce ah oo siiya madal onlayn ah oo lagu iibiyo farshaxankaaga iyo farshaxankaaga. Websaydhku wuxuu siiyaa dadka isticmaala qorshe ka duwan khidmadaha billaha ah ee u dhexeeya $ 4 iyo $ 16. Ka sokow lacagta billaha ah, madalku ma jiido dadka isticmaala diiwaangelinta ama liisaska.
Zibbet wuxuu ku takhasusay bogagga internetka ee loogu talagalay dadka leh farsamada gacanta, farshaxanka wanaagsan, ama alaabta guridda si ay u iibiyaan. Sidoo kale, waxaad soo dhoofsan kartaa badeecooyin kale oo aad iib u tahay websaytyada kale sida Etsy.
#11. Waxaad Sameyn Kartaan
Kani waa madal ka duwan kan websaydhka caanka ah ee eCommerce ee aad taqaan. Youcanmakethis.com waxay u oggolaanaysaa adeegsadayaasha inay soo bandhigaan qaababka samaynta farshaxanka iyo farsamooyinka halkii ay ka soo bandhigi lahaayeen alaabada farshaxanka kama dambaysta ah. Isticmaalayaasha ayaa la siinayaa 50% qiimaha qaab kasta oo lagu iibiyo mareegaha.
Sidoo kale, waxaa jira ikhtiyaar lagu muujinayo haddii aad rabto iyo in kale iibsadayaashu inay ku siiyaan sumcad markay adeegsadaan qaababkaaga iibsashada ka dib. Si aad wax ugu iibiso masraxa, waxaad u baahan doontaa inaad booqato mareegaha si aad u aragto shaybaarka isticmaaleyaashii hore u jiray si aad u ogaato sida loo aado diiwaangelinta iyo soo bandhigida alaabtaada.
Miyaad ka raadinaysaa suuqyada ugu fiican khadka tooska ah si aad ugu iibiso farshaxanka iyo alaabada farshaxanka lacag la'aan? Markaas eCrater waa meel la fiiriyo. Madalku wuxuu labanlaabmayaa sida suuq -geynta onlaynka ah iyo dhisaha bakhaarka dalwaddii ee adeegsadayaasha.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan rabnaa inaan kugu wargalinno in madalkani uusan caan u ahayn Etsy ama eCommerce kale oo caan ah oo laga yaabo inuusan helin gaadiid aad u badan oo aad u jeceshahay alaabtaada. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku talinaynaa eCrater inay noqoto goob lagu iibiyo farshaxankaaga iyo farshaxankaaga.
Booqo bogga rasmiga ah si aad wax badan uga ogaato
#13. Dukaanka Farshaxanka gacanta lagu sameeyo
Dukaanka Farshaxan -gacmeedku waa degel heer sare ah oo xubnaha laga qaado lacag dhan $ 5. Markaad bixiso lacagta isdiiwaangelinta, waxaad soo bandhigi kartaa inta farshaxan iyo farshaxan ee aad rabto iib ahaan.
Goobtu waa mid ka mid ah boggaga cusub ee ku yaal xannibaadda oo caannimadu si joogto ah ayey u sii kordheysaa, waxaan kula talinayaa goobta iibiyaasha farshaxanka mustaqbalka maadaama goobtu ay hesho taraafikada iibsadayaasha halista ah
Hubi tan: 23 fikrado ganacsi oo yaryar oo loogu talagalay ragga leh macaash sare
Storenvy waa hab aad ugu tagto iibiyaasha farshaxanka. Madalku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad lahaato dukaan si aad u soo bandhigto badeecadaha. Is -qoritaanka madalku waa bilaash laakiin waxay ku dallacayaan 10% iib kasta oo lagu sameeyo suuqooda laakiin kuguma dallacayaan iibinta laga sameeyay dukaankaaga. Booqo mareegaha si aad wax badan uga ogaato
#15. Gaari Waraabe
Kani waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee MarketPlaces Online ee lagu iibiyo Farshaxanka iyo Alaabada Farshaxanka. Hyena Cart waa barxad weyn oo eCommerce ah oo dadku u galaan si ay u iibsadaan oo u iibiyaan alaabada farshaxanka gacanta lagu sameeyo iyo kuwa la soo saaray labadaba. Waxaa jira waxyaabo badan oo laga soo iibsado goobta oo ay ku jiraan carruur iyo alaab qoys.
Websaydhku kuguma dallacayo liisaska laakiin waa inaad bixisaa bil kasta $ 5 dukaankaaga. Waxaan aad ugu talinayaa madalkan adeegsadayaasha maaddaama ay leedahay gaadiid aad u sarreeya oo iibsadayaasha halista ah.
Wax badan ka baro goobta iyada oo loo marayo xiriirkan.
Meylan waa madal kale oo awood u siisa adeegsadayaasha labadaba suuqa internetka iyo dukaanka. Madalku waa mid ka mid ah eCommerce -ka ugu wanaagsan agagaarka maaddaama uu kasbado taraafikada maalinlaha ah oo aad u sahlan waana u fududahay in lagu dhex maro dadka isticmaala. Qorshayaashoodu waxay u dhexeeyaan lacag la'aan (illaa 100 liisaska alaabta ee suuqa) ilaa Premium ($ 19.95 bishii) ilaa 1000 alaab.
Boggan waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dadka ka yimid Boqortooyada Ingiriiska. Goobtu waxay u oggolaanaysaa soo -bandhigga dhammaan noocyada badeecadaha oo u dhexeeya farsamooyinka gacanta lagu sameeyo ilaa soo -saarka alaabada.
Websaydhku lacag la'aan maahan maadaama dadka isticmaala loo sameeyo inay ku bixiyaan qaddar liis kasta iyo sidoo kale lacag -bixin bille ah oo u oggolaanaysa soo -bandhigid aan xad lahayn oo shay ah. Booqo goobta si aad wax badan u barato oo aad u bilowdo iibinta alaabtaada.
#18. Farshaxanka Farshaxanka
Tani waa goob kale oo lagu iibiyo farshaxankaaga iyo farshaxankaaga. Websaydhku waxa uu leeyahay qorshayaal bilaash ah iyo kuwo qiimo leh labadaba. Qorshaha bilaashka ah ee loo yaqaan qorshaha aasaasiga ah ee goobta ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku qoraan alaabta bilaashka ah bogga internetka.
Isticmaalayaasha doorbidaya isticmaalka qorshaha aasaasiga ah waxaa loo ogol yahay oo kaliya inay liis gareeyaan wax aan ka badnayn 100 alaab iib ah.
Dhanka kale, qorshaha caymiska wuxuu ku dallacayaa isticmaaleyaasha 0.15 ¢ liis kasta iyo $ 7.99 bishii si loo sameeyo liis aan xad lahayn. Waxaan kula talinayaa goobtan iibiyaasha halista ah maadaama ay leedahay gaadiid aad u badan. Booqo goobta si aad u ogaato sida ay u shaqeeyaan.
Madalkani wuxuu u furan yahay adeegsadayaasha caalamiga ah. ArtYah waxay u fidisaa suuq ballaadhan farshaxanka maadaama ay leedahay isticmaaleyaal ka kala yimid adduunka oo dhan. Waxaad ku abuuri kartaa koonto madal iyadoo aan loo eegin meesha aad joogto.
Si aad liiska uga samayso goobta, waa inaad ku bixisaa $ 0.10 liis kasta oo waliba waxay ka qaadaan lacag dhan 3.5% iibkaaga madal. Fadlan ogow in lacagtu aysan ku jirin kharashyada dhoofinta. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan suuqa, fadlan booqo goobta iyada oo loo marayo xiriirka.
Mercari waa goob kale oo ay tahay inaad u isticmaasho iibinta alaabta farshaxanka. Caannimada abka si joogto ah ayay kor ugu kacaysaa iyadoo abka uu helay qiimayno togan oo baaxad leh iyo qiimaynta isticmaalayaasha. Haddii aad rabto inaad la kulanto iibsadayaasha fanka, Mercari waa jidka aad ku tagi karto.
App -ku wax lacag ah kama qaado khidmadda liistada ama khidmadaha billaha ah waxay ka qaadaan 10% qiimaha shay kasta oo aad ku iibiso madal. Kharashaadka si toos ah ayaa loo diraa marka aad iibiso. Booqo goobta wixii faahfaahin dheeraad ah.
Hubi tan: 13 Sahamin onlayn ah oo Lacag caddaan ah lagu bixiyo PayPal
#21. Dabka dabka
Artfire waa suuq kale oo farshaxan oo khadka tooska ah ku siinaya ragga waaweyn sida Etsy ama Amazon socodsiinta lacagtooda illaa iyo inta aan ka hadlayno farshaxanka. Halkaan waxaad ka heleysaa dhammaan noocyada kala duwan ee farshaxanka iyo farshaxanka oo isugu jira farshaxan gacmeed ilaa farshaxan la soo saaray.
Websaydhku gabi ahaanba waa u bilaash inuu isdiiwaangaliyo oo wax lacag ah kaaama qaado liistada alaabta farshaxanka. Si kastaba ha noqotee, Artfire waxay ku dallacdaa lacag dhan $ 20 bishii dukaankaaga madal. Madalku waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna wanaagsan Suuqyada internetka ee lagu iibiyo alaabta farshaxanka iyo farsamada.
Isticmaalayaasha waxay xanuunka ku helaan ProPay, Paypal, ama Amazon Payments.
Waxaan sidoo kale kula talinayaa dukaanka khadka - Square saaxiibada i weydiiya aaladaha khadka tooska ah ee ugu fiican si aan u iibiyo ama u iibsado farshaxan la awoodi karo. Madal waxa la sameeyay dhawr sano ka hor, tan iyo markii la aasaasay, waxa ay caan ku noqotay oo keliya iyadoo kumanaan qof ay maalin walba ku soo qulqulayaan kana baxaan goobta si ay u iibsadaan waxna u iibsadaan.
Madalku wuxuu ku dallacayaa gabi ahaanba lacag la'aan inuu isdiiwaangaliyo ama liis gareeyo badeecada goobta. Si kastaba ha noqotee, waxay ka qaadaan waxoogaa lacag ah kaarka kaarka deynta. Waxaan si adag ugu talinayaa Square dadka iibiya alaabada farshaxanka.
Khasaaraha kaliya ee tartan ee Square waa xaqiiqda ah inay bixiso dukaanka khadka tooska ah oo aan lahayn goob suuq ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku talinayaa Square inay noqoto madal aad u fiican oo lagu iibiyo farshaxanka iyo farshaxanka. Fiiri goobta wixii faahfaahin dheeraad ah.
#23. Iibinta Hal -abuurka
Dib-u-iibsasho hal-abuur leh ayaa ka dhigaysa liiskayada suuqyada ugu fiican khadka tooska ah si loogu iibiyo farshaxanka iyo agabka farsamada. Madalku gabi ahaanba waa bilaash in la isticmaalo. Ma jiro ujro is-diiwaangelin ah, lacag liis ah, iyo lacag la'aan bishii, gabi ahaanba bilaash ah.
Haddii aad raadineyso inaad iibiso alaabtaada farshaxanka gacanta, waxaan si xoog leh kugula talinayaa inaad booqato dib -u -iibinta hal -abuurka si aad u barato sida ay u shaqeeyaan.
Sidoo kale, kuwa raadinaya inay iibsadaan alaabada farshaxanka ee la awoodi karo, dib -u -iibinta hal -abuurka ahi waa hab loo maro maadaama madalku leeyahay farshaxan iyo farshaxanno iib ah, ganacsi, iyo deeq.
#24. Iibso Farshaxanka Iibinta
Iibsashada-Iibinta farshaxanka maahan eCommerce-kaaga caadiga ah. Xirfadaha Iibsashada waa bog Facebook ah oo la abuuray 2013. Bogga waxaa ka muuqda bulsho si dhab ah u qaadata fanka.
Waxaa jira in ka badan 20,000 xubnood oo hadda leh marqaatiyo hal ama laba farshaxan iyo farshaxan la iibiyey. Haddii aad raadineyso madal aan wax lacag ah ka qaadin soo bandhigida farshaxanka iyo farshaxanka, markaa waa inaad tixgelisaa boggan Facebook ee xubnaha halista ah.
Goobtani waxay si adag ugu socotaa muwaadiniinta Maraykanka. Madalku waxa uu ogol yahay soo bandhigida oo kaliya kuwa gacanta lagu sameeyo sida alaabta gacanta lagu sameeyay, alaabta kor loo qaaday ama dib loo soo celiyay, iyo qaar ka mid ah alaabta daabacan.
Isticmaalayaasha looma oggola inay ku muujiyaan madalkan alaab guridda ama alaabta la soo saaray.
Is -qoritaanka masraxa gabi ahaanba waa lacag la'aan mana kugu dallacayaan inaad ku qorto madal laakiin waxay kaa qaadaan 7% qiimaha liiska shay kasta oo lagu iibiyo Aftcra. Waxaan si xoog leh ugu talinayaa madalkan kuwa iibiya farshaxanka.
#26. Ganacsade Farshaxan
Kani waa bog kale oo Facebook ah oo aad ku biiri karto si aad u muujiso alaabtaada. Suuqgeeyaha Craft wuxuu ka kooban yahay xubno si dhab ah u qaata oo si joogto ah u raadiya alaabta ay iibsanayaan.
Haddii aad raadineyso goob aad ku soo bandhigto badeecadaada bilaash, waxaan kugula talinayaa inaad jeclaato boggan si aad u bilowdo soo bandhigida farshaxankaaga iyo farshaxankaaga iibka.
#27. Alaab aan caadi ahayn
Badeecadaha aan caadiga ahayn waa madal kale oo ay tahay inaad tixgeliso haddii aad rabto inaad la xiriirto kuwa jecel farshaxanka. In kasta oo madalku si joogto ah ugu furan yahay dadka oo dhan, waa inaad ogaataa inaadan hubin in alaabtaadu ku soo bandhigi doonto goobta.
Shaygaagu wuxuu u baahan yahay inuu buuxiyo halbeeg gaar ah oo lagu soo bandhigo goobta. Booqo goobta si aad u ogaato sida ay u shaqeyso.
#28. Suuqa Jannooyinka Farshaxanka
Craft Junkies Marketplace waa koox kale oo Facebook ah oo iibisa oo iibisa farshaxanka iyo farsamada gacanta. Facebook hadda waa mareegaha labaad ee ugu weyn adduunka taasoo ka dhigaysa madal la taaban karo oo lagu soo bandhigi karo alaabtaada.
Shirkaduhu waxay ka faa'iidaystaan ​​​​Facebook si ay u suuq geeyaan alaabtooda, adiguna waxaad fure u noqon kartaa fursadda aan xadka lahayn ee facebook u soo bandhigto suuq ahaan. Ma jeceshahay inaad iibsato ama iibiso farshaxan la awoodi karo? Kadib ku biir kooxdan si aad xubin uga noqoto.
#29. Suuqa Suuqa Farshaxanka
Kani waa bog kale oo Facebook ah oo xubinnimadiisu sii kordhayso. Markii iigu dambeysay ee aan hubiyo, kooxdu waxay leedahay in ka badan 14,000 oo xubnood. Waxaan idinka codsanayaa inaad like saartaan bogga si aad ugu biirtaan liiska iibiyayaasha fanka iyo iibsadayaasha sii kordhaya.
Boggan wuxuu marka hore kuu oggolaanayaa inaad kasbato $ 30 ka hor intaadan kugu dallacin iibka la sameeyay hadda ka dib. Booqo websaydhka rasmiga ah si aad u aragto sida loo noqdo xubin
Waxaan aaminsanahay in goobtan ay qancinayso raadintaada suuqyada ugu fiican ee internetka si loo iibiyo alaabta farshaxanka iyo farsamada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan qoraalkan, fadlan xor u noqo inaad isticmaasho sanduuqa faallooyinka ee hoose.
Inaad noqoto qoraa xog-ogaal madax-bannaan waxay leedahay faa'iidooyin badan, sida xorriyadda doorashada culayskaaga shaqada, jadwalkaaga, iyo…
Dib -u -Eegid buuxda ee Empowr 2021: Mid kale ayaa Lacag Ka Sameeya Khayaanada Internetka?
Empowr waa madal u ogalaata isticmaalayaasha inay lacag ka helaan taageere-base, iibinta iyo waxbarida isticmaalayaasha…
Dib -u -eegista Xeerka Quantum 2021: Ma u qalantaa mise khiyaano cusub oo Ganacsi Labaad?
Koodhka Quantum waa software ganacsi oo ikhtiyaari ikhtiyaari ah kaasoo ka caawiya ganacsatada inay ku lug yeeshaan ikhtiyaarada ikhtiyaariga ah ee…
Laga soo bilaabo noqoshada goob bulsho oo ay dadku ku wadaagaan qoraal, sawirro, muusig, iyo fiidiyowyo, Tumblr wuxuu u xuubsiibtay…